नयाँ सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु, के के भयो काम ? – Nepal Press
नयाँ सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु, के के भयो काम ?
२०७७ फागुन २१ गते १५:०५
नेपाल–चीनबीच दुई वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवत जावत गर्ने मध्येको कोरोला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो ।
‘मुस्ताङवासीको माग र गण्डकी प्रदेश सरकारको दबाबले बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको छ । केही वर्षमै निर्माण भइसक्ने हाम्रो आशा छ’,उनले अब हाम्रो ध्यान बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनेतर्फ रहेको बताए । एक सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजना मार्फत दुई लेनको सडक विस्तार, पुल निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन २१ गते १५:०५